Nserahwɛfo Nye Nserahwɛ: Jehovah Adasefo Edwumayɛbea A Ɔwɔ Korea
Aso ɔsɛ dɛ idzi kan kã kyerɛ hɛn ansaana aba nserahwɛ? Nyew. Sɛ nyimpa a wɔreba nserahwɛ no dɔɔ sõ o, wɔnndɔɔ sõ o, yɛserɛ dɛ hom ndzi kan mbɔ hɛn amandzɛɛ ansaana hom aba nserahwɛ. Iyi remma ahokyer mmba ha osian nyimpadɔm a wɔbɛba ebegu ha no ntsi, na woara so w’enyiwa aagye wɔ wo nserahwɛ no mu.
Ebɛn aber na ɔsɛ dɛ edu ha? Yɛserɛ dɛ bɔ mbɔdzen du ha dɔnhwer kor ansaana ber a ekãa dɛ edze bɛba no asõ. Iyi remma ahokyer mmba ha osian nyimpadɔm a wɔbɛba ebegu ha no ntsi.
Wɔkyerɛ Bible ho nwoma ahorow ase kɔ Korean nye Korean Mmum Kasa mu, wowie a wɔdze akɔ Korean enyifurafo kasa mu. Wɔyɛ video nye dza wɔbɔ tsie ahorow so. Afe biara, wɔdze magazine ɔpepem pii nye nwoma afofor tɔɔn ɔhaha pii a ɔwɔ kasa bɔbor 30 mu mona asafo ahorow.
Edwumayɛbea Ahorow Nye Nserahwɛ: Korea